लचिलो खर्च खाता (FSA) १०१: तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर भारी खेल समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र समुदाय स्वास्थ्य
मुख्य >> कम्पनी >> लचिलो खर्च खाता (FSA) १०१: तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ
लचिलो खर्च खाता (FSA) १०१: तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ
तपाईंसँग स्वास्थ्य बीमा भए पनि, कहिलेकाँही त्यस्ता खर्चहरू हुन्छन् जसलाई कवच गरिएको छैन (जसलाई अफ-अफ-पकेट खर्च पनि भनिन्छ) - र ती स्वास्थ्य सेवा लागतहरू महँगो हुन सक्छ। एक लचिलो खर्च खाता (FSA) एक विकल्प विकल्पहरू उपलब्ध छन् जुनसँग उनीहरूको रोजगारदाताहरू मार्फत बीमा छ। यहाँ, लचिलो खर्च खाताहरूको बारेमा तपाईंलाई जान्नुपर्ने सबै जान्नुहोस् - तिनीहरू के हुन् र उनीहरूले तपाईंलाई कसरी लाभ पुग्न सक्छन्।
एक FSA के हो?
TO लचिलो खर्च खाता , कहिलेकाँही लचिलो खर्च व्यवस्था भनिन्छ, एक विशेष बचत खाता हो जहाँ तपाईं प्रिटेक्स पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थ, तपाईले खातामा राख्नु भएको कुनै पनि रकममा IRS लाई आयकर भुक्तान गर्नुहुन्न।
दुई सबैभन्दा सामान्य प्रकारका FSA हरू हुन्:
स्वास्थ्य सेवा वा चिकित्सा FSAs: मेडिकल, डेन्टल, र दृष्टि खर्चहरूको लागि यी खाताहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन कभर गरिएको छैन, वा आंशिक रूपमा तपाईंको बीमाले ढाकेको हुन्छ।
आश्रित हेरचाह FSAs: यी खाताहरू नर्सरी स्कूल, डेकेयर, स्कूल पछि देखभाल, वा योग्य आश्रितहरूको लागि एल्डर हेरचाह कार्यक्रमहरूको अफसेट गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले पहिले यी खर्चहरूको लागि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि प्रतिपूर्तीको लागि सबमिट गर्नुहोस्।
केही रोजगारदाताहरूले सीमित उद्देश्यका दुई अन्य प्रकारका एफएसए प्रस्ताव गर्न पनि छनौट गर्छन्, तर तिनीहरू कम सामान्य छन्:
व्यक्तिगत प्रीमियम प्रतिपूर्ति FSAs: यी खाताहरू तपाइँ, पति / पत्नी, वा योग्य आश्रितहरू, व्यक्तिगत दन्त / दृष्टि प्रीमियम, दुर्घटना / अक्षमता प्रीमियम, क्यान्सर बीमा प्रीमियम, वा अस्पताल क्षतिपूर्ति कभरेज रूपमा गैर रोजगारदाता प्रायोजित मेडिकल प्रीमियम, भुक्तान गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
दत्तक सहायता FSAs: उचित र आवश्यक खर्चको प्रतिपूर्तिको लागि प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईं कानुनी रूपमा बच्चा स्वीकार्ने प्रक्रियामा गर्नुहुन्छ।
एक प्रकारको FSA मा भाग लिने अर्को प्रकारको सहभागितामा कुनै असर हुँदैन, तर तपाईंको भाग लिनको लागि योग्यतालाई असर गर्न सक्छ स्वास्थ्य बचत खाता (HSA) ।
कसरी एक FSA काम गर्दछ?
FSA हरू एक राम्रो तरिका हो आवश्यक खर्चहरू कभर गर्न र बाटोमा कर ब्रेक प्राप्त गर्नका लागि। तर त्यहाँ नियमहरु छन् तपाईले त्यहाँ बचत गर्नु भयो, जस्तै कसले योगदान गर्न सक्छ, कति र कसरी तपाई पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
FSA खाताहरू केवल रोजगारदाताहरू मार्फत मात्र उपलब्ध छन्; केहीले आफ्ना कर्मचारीहरूको FSA हरूमा योगदान पुर्‍याउँछन्, तर यो आवश्यक छैन। स्वास्थ्य सेवा FSAs को लागि, २०२० मा तपाईं वार्षिक $ २,750० योगदान गर्न सक्नुहुनेछ, तर त्यो राशि प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुन्छ। आश्रित FSAs को लागि, वार्षिक कुल परिवार अधिकतम योगदान $ 5,000 हो।
धेरै एफएसएमा, बर्षको अन्त्यबाट प्रयोग नभएको पैसा हराउँदछ, त्यसैले यो कुराको लागि योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ कति खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने अनुमानको आधारमा तपाइँ खर्च गर्नुहुन्छ भनेर। त्यहाँ यसको अपवादहरू छन् वा यो नियम गुमाउछन्, राष्ट्रपति केविन Haney अनुसार बढ्दो पारिवारिक लाभहरू । केही कम्पनीहरूले जेलबाट मुक्त विकल्प दुई मध्ये दुई मध्ये एक प्रस्ताव दिन छान्न सक्छन्, उनी भन्छन्। यसमा समावेश छन्:
दुई महिना र १ days दिनको अनुग्रह अवधि
अर्को योजना वर्षमा $$० को क्यारीओभर
यदि तपाईले सम्भावित कर बचतको बिरूद्ध सम्भावित हराएको योगदानको जोखिम तौलनुभयो भने यसले मद्दत पुर्‍याउँछ।
तपाईं मात्र आफ्नो FSA मा कोषहरू योग्य आउट-अफ-पकेट खर्चहरूको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका खर्चहरू छन् जसको लागि तपाईं आफ्नो फन्ड्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू राज्यबाट राज्यमा फरक हुन्छन् र रोजगारदाताले योजनाको योजनाबाट।
चिकित्सा FSAs को लागी , योग्यताको लागि सामान्य दिशानिर्देश यो हो कि खर्चहरू निदान गर्न, उपचार गर्न, उपचार गर्न, वा रोगलाई रोकथाम गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ। को FSAfeds.com वेबसाइट कस्तो प्रकारको मेडिकल FSA खर्चहरू योग्य छन् भनेर जाँच्नको लागि एउटा खोजी उपकरण छ। यसले कुन कागजात वर्णन गर्दछ, रसीदहरू जस्तै, तपाईंले आफ्नो खर्चको योग्यता प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। केही एफएसए प्रदायकहरूले तपाईंलाई डेबिट कार्ड जारी गर्दछ जुन तपाईं वस्तुहरू खरीद गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, अन्यले भुक्तानी पछि प्रतिपूर्तिको लागि रसीदहरू सबमिट गर्न आवश्यक छ।
योग्य खर्चहरूमा कपिमेन्ट्स, कटौतीयोग्यहरू, केहि नुस्खाहरू वा ओभर-द-काउन्टर औषधिहरू, र अन्य मेडिकल आपूर्तिहरू जस्तै पट्टि, थर्मामिटर, वा हीटिंग प्याडहरू समावेश छन्। तपाईंको खातामा पैसा योजना वर्षको अन्त्यसम्म प्रयोग गर्न आवश्यक छ, तर तपाईं आउँदो बर्षको कभर आपूर्तिहरूमा स्टक गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
कुन खर्च योग्य छ भनेर बुझ्नको लागि यो खाता सम्झनु भनेको जेब पेन्डरग्यास्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्याख्या गर्दछ। दक्षिणी बैंक कम्पनी । यसको मतलब चीजहरू जुन तपाईले सामान्य रूपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ तपाईको मेडिकल वा दन्त बीमा हुँदैन, प्लस कापेमेन्ट र कटौतीयोग्य। एउटा ठूलो कुरा जुन तपाईंले आफ्नो FSA प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न त्यो भनेको स्वास्थ्य वा दन्त बीमा प्रीमियम हो। मेडिकल FSAs सक्नुहुन्छ हैन यसको लागि प्रयोग गर्नुहोस्:
प्रमाण बिना उत्पादनहरू तिनीहरू उपचार वा कुनै पनि रोगको उपचार गर्न सक्छन्, जस्तै आवश्यक तेल वा रस सफा
कल्याणकारी उत्पादनहरू जस्तै पूरकहरू वा भिटामिनहरू (नोट: त्यहाँ अपवादहरू छन्। केहि विटामिनहरू जब फिजिसियनले सिफारिस गरेको खण्डमा ढाक्न सकिन्छ वा मेडिकल आवश्यकता मानिन्छ।)
आश्रित हेरचाह FSAs को लागी , कोष तपाईको बच्चाहरु वा अन्य आश्रितहरु को लागी खर्च को लागी प्रयोग गरीनु पर्छ तपाई काम मा, स्कूल, वा जागिर खोज्दै। तिनीहरूले निश्चित डेकेयर, बुढेसकालमा हेरचाह, पूर्वस्कूली, र बच्चा सम्बन्धी खर्च समावेश गर्न सक्दछन्। अभिभावक र हेरचाहकर्ताहरूले आफ्नो मासिक आय निर्भर हेरचाह खर्चको एक ठूलो हिस्सा खर्च गर्दछ — एक 8..8% को औसत ।तपाईंको आयको धेरैमा कर भुक्तान गर्नु ती लागतहरूको साथ सहयोग गर्न अनमोल छ।
कति प्रतिशत जनसंख्यालाई सिजोफ्रेनिया छ?
सामान्यतया, एकचोटि तपाईंले यो निर्णय गर्नुहुन्छ कि तपाईं प्रत्येक महिना तपाईंको FSA मा कति जम्मा गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो योगदान दर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न प्रत्येक वर्ष खुला नामांकन अवधि सम्म। त्यहाँ केही अपवादहरू छन्, विशेष घटनाहरू जब तपाईं समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ:
वैवाहिक स्थितिमा परिवर्तन (विवाह, पति वा पत्नीको मृत्यु, तलाक वा मृत्यु)
आश्रितहरूको संख्या परिवर्तन गर्नुहोस् (बच्चाको जन्म वा दत्तक)
रोजगारमा परिवर्तन जसले योग्यतालाई असर गर्छ
यदि तपाईंले आफ्नो जागिर हराउनुभयो वा छोड्नुभयो भने, तपाईंको एफएसएमा पैसा तपाईंको नियोक्तालाई जान्छ यदि तपाईं कोबरा मार्फत स्वास्थ्य बीमा जारी राख्न छनौट गर्नुहुन्छ। तपाईं पनि, सैद्धान्तिक रूपमा, वर्षको सुरूमा तपाईंको सम्पूर्ण एफएसए कोष प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि बाँकी पेचेक योगदानहरू हुनु अघि तपाईंको काम छोड्नुहोस्।
के मैले FSA प्रयोग गर्नु पर्छ?
FSA का धेरै फाइदाहरू छन्। तपाईं करहरूमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।उदाहरण को लागी, मानौं तपाईलाई बिरामीको हेरचाह चाहिन्छ र $ २,००० कटौती योग्य छ। यदि तपाईंसँग नियमित बचत खाता छ र तपाईंको खातामा जम्मा गर्नको लागि तपाईंको शुद्ध भुक्तानीको एक अंश लिनुभयो भने, तपाईंले पैसामा आयकरहरू तिर्नुभयो। तर यदि तपाईंसँग FSA छ भने, योगदानहरू तपाईंको चेकबाट सीधा लिईन्छ, करहरू अघि, र तपाईंको खातामा जम्मा गरिन्छ। स्वास्थ्य बीमा कटौती योग्य खर्च भएदेखि, जब तपाईं अस्पताल भुक्तान गर्न पैसा निकाल्नुहुन्छ तपाईं करहरू तिर्नुहुन्न। तपाईंले taxes २,००० मा तिर्ने आय करहरूको रकम बचत गर्नुभयो।
तपाईंले बचत गर्नुभएको पैसा उपलब्ध छ किनभने यो तपाईंको FSA मा जम्मा गरियो। मतलब, यदि तपाईले एक महिनामा0२0० बचाउन साइन अप गर्नुभयो, र फेब्रुअरी १ ​​मा एक भेट छ भने, तपाईले त्यो रकम कुनै पनि योग्य खर्चमा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ र कम स्वास्थ्य सेवा लागतहरू राख्नुहुन्छ भने, यो सम्भव छ तपाईंले पैसा गुमाउन सक्नुहुन्छ: यो प्रयोगको लागि फिट हो वा यसलाई FSA मार्फत प्रणाली गुमाउछ।
निर्णय गर्नु अघि यदि यो तपाईंको लागि सही हो भने, यसले योग्य स्वास्थ्य सेवा खर्चहरूको सूची समीक्षा गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको एफएसएमा योगदान पुर्‍याउन तपाईंको लक्षित रकम निर्धारण गर्न विगत धेरै वर्षहरूमा आधारित प्रति वर्षमा तपाईंले कति खर्च गर्नुहुन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्दछ। तपाइँको योगदान दर निर्धारित गर्न मद्दतको लागि, तपाइँ FSA स्टोर अनलाइन उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: FSA क्यालकुलेटर
यदि तपाईं आफ्नो खातामा प्रयोग नगरिएको कोष छोडेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाईं यसको सट्टामा स्वास्थ्य बचत खाता (HSA) लाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ। HSAs FSAs भन्दा फरक छन्। तिनीहरू प्रायः चिकित्सा खर्च खर्च गर्न प्रयोग गरिन्छ तपाईले आफ्नो बीमा घटाउन सकिने पहिले, प्राय: उच्च-कटौती योग्य स्वास्थ्य योजनाहरूसँग मिल्नु अघि। सामान्यतया तपाईं दुबै HSA र FSA दुवैमा भाग लिन सक्नुहुन्न। त्यहाँ फरक योगदान दरहरू, योग्य खर्चहरू, र नियमहरू छन्। उदाहरण को लागी, एक HSA ले तपाईलाई बर्षौं बर्ष रकममा रोल गर्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ यसको कुनै प्रयोग छैन वा यो नियम गुमाउनुहोस्, जस्तै धेरै एफएसएहरूसँग।
म मेरो बाँकी मेडिकल एफएसए कोषमा के प्रयोग गर्न सक्दछु?
यदि तपाईंले आफ्नो योजना वर्षको अन्त्य नजिकै पाउनुभयो भने पैसाको साथ तपाईंको FSA अझै बाँकी छ, त्यहाँ जानु अघि यसका खर्च गर्ने केही तरिकाहरू छन्:
ब्रेल पुस्तक र म्यागजिनहरू
स्तन पम्प र आपूर्ति
सम्मेलनहरु तपाइँ एक चिकित्सा अवस्था को लागी उपस्थित हुन
प्रतिलिपिहरू, सिक्युरन्स, कटौतीयोग्यहरू
खोकीको घाँटी र घाँटी दुख्ने
सीपीएपी मेशीन र आपूर्ति
घर वा व्यक्तिगत डिफ्रिब्रिलेटर
दन्त सीलेन्ट र डेन्चर चिपकने
दन्त x रे
डायपर रेश मलहम
स्त्री देखभाल उत्पादनहरू
एफडीए-अनुमोदित आहार कार्यक्रम
चश्मा, सम्पर्क लेन्स, र सम्पर्क लेन्स केयर
Hहवा regrowth उत्पादनहरु
एड्स र ब्याट्रीहरू सुन्दै
खोपहरू तपाईंको स्वास्थ्य बीमा योजनाले कभर गर्दैन
लजिंग वा भोजन चिकित्सा उपचारहरूबाट ल्याइएको
मेडिकल घर रिमोडेलिंग
पल्स ऑक्सीमीटर Ome केही स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले COVID-19 को लागि सकारात्मक परीक्षण गरेका आफ्ना बिरामीहरूलाई यी सुझाव गर्दै छन्
धूम्रपान समाप्ति उत्पादनहरू
वार्षिक चेकअपहरू — वार्षिक भौतिकहरू, आँखा परीक्षण, दन्त परीक्षण
यदि मसँग एक चिकित्सा FSA छ, के म अझै सिंगलकेयर कूपन प्रयोग गर्न सक्छु?
चाहे तपाईंसँग मेडिकल एफएसए छ वा छैन, एकलकेयर कूपनको प्रयोगले तपाईंलाई प्रिस्क्रिप्सन र ओभर-द-काउन्टर औषधिहरूको लागि तिर्ने रकम घटाउन मद्दत गर्दछ। यसले केवल तीन सजिलो चरणहरू लिन्छ। तपाईंले लिनुहुने औषधीहरूको खोजी गर्नुहोस् singlecare.com । एक एकलकेयर कुपन बचत गर्नुहोस्। त्यसो भए, तपाईंको FSA डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर औषधीको लागि भुक्तान गर्नुहोस् — वा तपाईंको FSA खाताबाट प्रतिपूर्तिको लागि रसीद बुझाउनुहोस्।
के मेडिकेयर शिंग्रिक्स कभर गर्दछ?
संसारमा कति मानिसहरु अटिजम छन्
toenail कवक epsom नुन को लागी घरेलु उपचार
डिपो शट कती समय पहिले प्रभावी छ
मलाई आइसक्रिम खाए पछि पखाला किन लाग्छ?
के हुन्छ जब तपाइँ बेनाड्रिल र अल्कोहल मिलाउनुहुन्छ
बान्ता र उल्टी संग मद्दत गर्न को लागी चीजहरु